Maamulka Somaliland oo 7,250 qof ka qixiyay Laascaanood - QM | KEYDMEDIA ONLINE
5 December 2021 Doorashooyinkii kuraasta Hop154 iyo Hop103 oo la laalay
Maamulka Somaliland oo 7,250 qof ka qixiyay Laascaanood - QM
In ka badan 7,250 qof oo kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya, ayaa laga soo saarey Laascaanood, iyadoo loola dhaqmay qaab aan wanaagsanayn oo ka baxsan bini'aadanimada, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
HARGEYSA, Soomaaliya - Warbixin ay shaacisay Hay'ada Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini-adam-nimada ee OCHA, ayaa lagu sheegay in dadka si qasab ah looga soo saarey Laascaanood billowgii bishaan Oktoobar ay gaarayaan 7,250 qof.
Hay'adda OCHA ayaa sheegtay in dadkaan oo si qasab ah oo ka baxsan dhaqanka Islaamka looga soo saarey Laascaanood ay la kulmeen dhibaatooyin ay kamid yihiin, is waayitaan ka dhex dhacay qaar kamid ah waalidiinta iyo ubadkooda.
Dadkan oo u badan kuwa kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya, ayaa laga soo saarey Laascaanood, iyadoo loola dhaqmay qaab aan wanaagsanayn oo ka baxsan bini'aadanimada.
Hooyo iyo caruurteeda ayaa la kala geeyay, dad badan ayaa hantidii ay ku lahaayeen magaaladda laga soo eryay, waxaana la dhigay kuwa sabool ah oo Maanta barakaciyaal noqday.
UNHCR waxay sheegtay in ilaa 400 qoys ama dad gaaraya 2400 lagu wargeliyey inay ka baxaan magaalada Ceerigaabo ee Maamulka Somaliland inta aan la gaarin 21-ka bishan Oktoobar.
Hay'adda UN ee OCHA ayaa dhawaan sheegtay in boqolaal qof ay ku laabteen HirShabeelle, iyadoo kuwa kalena ay diyaarinayaan inay kasoo baxaan Puntland, kuwaasoo dalbadey in laga caawiyo dhanka safarka.
Somaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya 1991, ayaa si qasab ah dadka kusoo saartey, iyadoo ku andacoonaysa inay qeyb ka ahaayeen falalka amni darro ee ka dhacay Laascaanood.
Laakiin, sababta dad badan waxay ku sheegeen inay tahay loolan dhanka ganacsiga ah kadib markii Somaliland aragtay in dadka kasoo jeeda Koonfurta ay horumar badan oo ganacssi sameynayaan, oo tiro ahaana bushada kusoo badanayeen 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
Hay'addaha caalamka oo QM ay kamid tahay, dowladda Soomaaliya iyo Xildhibaano Somaliland u dhashay ayaa cambaareeyay qaabka loola dhaqmay dadka reer koonfureedka ee laga soo saarayo Laascaanood.
Soomaaliya ayaa mar kale kaalinta koowaad ka gashay liiska dalalka ugu musuq-maasuqa badan caalamka, sida lau sheegay warbixin ka soo baxday Transparency International.
Kuraas lagu doortey Muqdisho oo ka hakinayo
Warar 7 December 2021 17:16